Europe Travel N'oge The Spring Season | Save A Train
Home > Travel Europe > Europe Travel N'oge The Spring Season
Europe Travel na April pụtara Europe Travel N'oge The Spring Oge! Ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime Europe bụ n'ebe dị anya ụwa, kasị nke ama obodo ndị ka na-a bit chilly na April (mkpọ ya). ka, Europe Travel na April pụrụ ịbụ otu n'ime ndị kasị mma ọnwa nke afọ ileta kpa na kasị ewu ewu obodo Ebe a. okpomọkụ na-na-ekpo ọkụ ezuru ụtọ nlegharị anya, ma ìgwè mmadụ ahụ nha dị nta karịa ị ga-ahụ na-amalite na May na June. Ebe a bụ anyị na ndepụta nke ebe ileta na gị Europe njem n'oge opupu ihe ubi!
Nke a na foto e weere na Europe Travel N'oge The Spring, picture udo Lakeside obodo miri-acha anụnụ anụnụ mmiri megide ndị foothills nke Alps, ebe snow-capped ọnụ ọnụ na-etolite a dị ịrịba ama backdrop na enchanting Borromeo Islands; beguiling Como, ebe ugwu eruda n'ime ogbu mmiri na ọmarịcha obodo-jidesienụ mkpọda. Ndị a ụdị Mpaghara bụ obiọma akpali gị dee uri ma ọ bụ spontaneously n'ogige atụrụ n'ime a n'ala nkịta ọnọdụ. Ọ bụ nnọọ otú ahụ n'ụzọ na-eju udo!
Gaa Leta region na April, Mmiri dị ka akụkụ nke Insight eduzi enchanting Italian Lakes njem ịnọ n'ihu ìgwè mmadụ.
Europe Travel N'oge The Spring na Barcelona / Spain
Agba mmalite nke opupu na-enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè na Barcelona. Ọ ga-ewe ihe na-ada na ịhụnanya na nke a Spanish obodo na Spanish ndị mmadụ, onye-echeta mgbe niile iji zuru ike na-ewe a kwa ehi ụra ehihie – ihi ụra ngwa ngwa mgbe oge nri ehihie gasịrị, nọ na-ezuru na-acha ọcha osimiri, eri na-atọ ụtọ paella, na aṅụ ọhụrụ sangria.
Tọgbọ na Catalonia ebe, na na Northeastern Mediterranean n'ụsọ oké osimiri nke Spain, Barcelona bụ obodo nke abụọ kacha buo ibu na Spain, na otu n'ime ndị kasị ama ebe maka njem na Europe Travel N'oge The Spring. Barcelona bụ ihe na-akpali crossover nke incredibly ochie ụkpụrụ ụlọ bara nnukwu uru na n'oge a haziri. Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye ofufe nke Gaudi ije, -abịa ebe a na-ele alluring Sagrada Familia, Casa Batllo, na Güell Park. Barcelona na-emekarị ọkụ nile n'afọ, na ị nwere ike ịga nke a njem nleta friendly obodo n'oge ọ bụla nke afọ.
na Bruges / Belgium
I nwere ike ịma na Bruges, Belgium, na-akpọ “broozh,” ma ọtụtụ, na dike nke “na Bruges” ihe nkiri, -eme bụghị. Ha bụ ndị Dublin, ziga ya ebe ahụ ha boss maka izu abụọ mgbe a hit na-aga na-ezighị ezi. Otu bụ a na-eto eto hothead onye na-ahụ enweghị ihe ha ga n'ebe ọ bụla ma Dublin; nke ọzọ, okenye, nro, ọzọ ọchịchọ ịmata, aka ekedep a akwụkwọ ntuziaka na ọkwa: “Bruges bụ ihe kasị mma chekwara ochie obodo na Belgium!”
Ya mere o yiri n'ezie. Ọ bụrụ na ndị nkiri emezu ihe ọ bụla ọzọ, ọ kpalitere ọtụtụ ọchịchọ ngwa ngwa ịga Bruges.
eji bụ abụọ pụrụ iche n’afọ niile! N'ịbụ n'etiti France na Spain, obere obodo maara nke ọma n'ihi na mmetụta siri ike n'obodo abụọ wetara, culminating aha ọjọọ biya na chocolate. Yana Paris, Prague, na Budapest, nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihunanya obodo na Europe jupụtara ọwa mmiri na ndị agadi ochie ụlọ.
Europe Travel N'oge The Spring na Cologne / Germany
Nke a 2,000 afọ obodo na-emi odude n'ebe ọdịda anyanwụ Germany na bụ region isi omenala ehiwe. Na ochie Cathedrals na breathtaking osimiri echiche, Cologne bụ a abịa-nke kwesịrị ebe. Karịsịa ndị na-chọrọ na-awụlikwa elu n'ime ọhụrụ omenala na ahụmahụ a ụzọ ndụ ọhụrụ mgbe ejegharị ejegharị na Europe. Echefula igwefoto gị! Cologne bụ ihe na-emeghe kpọrọ obodo. Ọ bụ ma eleghị anya ọ bụghị dị ka ihe mara mma na mbụ anya dị ka obodo ndị ọzọ, ma mgbe ị na-eje ije gburugburu, ị ga-ahụ na ọ bụ otu n'ime kacha obodo na Germany na maa na anyị ndepụta maka Europe Travel N'oge The Spring.
The Altstadt (ochie obodo) nwere ụfọdụ dị mma nke ukwuu ụlọ, nke na-edina nri osimiri Rhine. Dị nnọọ na-esote ya bụ Cologne Cathedral, a UNESCO ụwa nketa saịtị. Ọ bụ uru na ọrịrị elu n'ime otu nke ụlọ elu abụọ.
Cologne bụ banyere ikuku na ndị ya. Ndị mmadụ na Cologne ha n'anya obodo. Ha nwere onwe ha olumba na nnọọ ole na ole music na ìgwè ndị agha na-abụ abụ banyere obodo ndị a olumba. Oge ka ahịhịa elu na ịmụ asụsụ ọhụrụ!
Gịnị ka ị na-eche? E nwere ọtụtụ akụ ememe na i nwere ike iri uru nke na-aga Europe Travel N'oge The Spring. Save A Train emekwa ka ọ super mfe ka akwụkwọ a ụgbọ okporo ígwè tiketi ọ bụla n'ime ndị a na-aga, ngwa ngwa na effortlessly!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro) Germany
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / nl na / ru ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.